WAR CUSUB: Aubameyang iyo Dembélé oo bixiyay qishkii ugu waynaa oo ka farxinaya Milan & Barcelona – Gool FM
WAR CUSUB: Aubameyang iyo Dembélé oo bixiyay qishkii ugu waynaa oo ka farxinaya Milan & Barcelona
(Dortmund) 08 Agoosto 2017 – Waxaa baraha bulshada laga helayaa xogo muujinaya in Pierre-Emerick Aubameyang iyo saaxiibkii ay Borussia Dortmund u wada saftaan ee Ousmane Dembélé ay kala doonayaan inay ku biiraan AC Milan iyo Barcelona.
Maamulka Rossoneri ayaan marna qarinin xiisohooda ku aadda rabitaanka Aubameyang, oo ah laacib kusoo barbaaray isla da’yarta kooxda AC Milan kahor intaanu jookar ka noqonin Germany. Wuxuuse qish wayn maanta bixiyay markii uu ”like” saaray Tweet arrintan ku saabsan.
“Dhibaatadu ma aha like-ta uu Aubameyang saaro Instagram-ka Milan. Halkan wuu usoo ordi lahaa, dhibaatadu waa lacagta ay ku qiimeeynayso BVB oo ah €80m,” ayuu soo qoray AlexMil20085237 – taasoo uu ‘like’ saaray laacibkan caalamiga ah ee reer Gabon.
Yeelkeede, waxaa jira culays kale oo soo koray Rossoneri, maaddaama ay Borussia Dortmund aysan doonaynin inay hal xagaa wada fasaxdo Aubameyang iyo Dembélé.
Waxaa jira warar ka imanaya Germany iyo Spain oo tibaaxaya in Barcelona ay isha la raaceeyso Dembele iyadoo la diyaar ah €70m.
Kaaga darane maanta ayuu Dembele bixiyey qishkii ugu waynaa ka gadaal markii uu koontooyinkiisa Twitter iyo Instagram ka saaray tixraac kasta oo muujinaya kooxda Borussia Dortmund.
Juan Guillermo Cuadrado oo shaki uga jiro kulanka Super Coppa Italia.